Olympus OM-D E-M10 Mark III, fikasihana Retro ary mety ho an'ny dia | Vaovao momba ny gadget
Ruben gallardo | | sary
Fakan-tsary tsy misy taratra Olympus misongadina amin'ity fiatraikany Retro ity; endrika mahazatra malaza amin'ny besinimaro. Fantatry ny orinasa izany ary mitohy ny zotram-pitaovana vaovao. Noho izany ny fisehoan'ny vaovao Olympus OM-D E-M10 Mark III mifankazatra toy ny taranaka roa teo aloha.
Taorian'ny taona maro teo amin'ny tsenan'ny Olympus OM-D E-M10 Mark II dia efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny mpandimby azy. Ary raha ny marina dia tsy hita miharihary koa ireo fiovana. Mazava ho azy fa mbola mitohy izany iray amin'ireo maodely tsara indrindra hitety hazavana (mahazo lanjan'ny 362 grama ny vatanao) ary mahazo vokatra tsara.
Ny Olympus OM-D E-M10 Mark III dia manasongadina sary mihetsika farany an'ny orinasa: TruePic VIII. Ary koa, ny sensor izay ho hitanao ao dia a 16 megapixel Live MOS ary fampiorenana sary 5-axis. Mandritra izany fotoana izany, tsy toy ny mpifaninana hafa (Fujifilm sasany na Sony sasany), ity maodely ity dia manana viewfinder optika. Raha faritana bebe kokoa dia manana teboka 2,36 tapitrisa ny famahana.
Etsy ankilany, any aoriana, ankoatry ny fananana fanaraha-maso sasantsasany, hita ihany koa ny efijery LCD. Ny diagonal an'ity dia 3 santimetatra ary mikasika azy tanteraka. Mampitaha ny fikirakirany ny a finday avo lenta. Autofocus amin'ity fakantsary Olympus ity dia mifandray amin'ireo faritra 121.
Mikasika ny fahafahan'ny fandraketana horonantsary, ny Olympus OM-D E-M10 Mark III dia afaka mahazo clip amin'ny vahaolana 4kAhoana no lamaody, amin'ny hafainganam-pandeha farany 30 fps. Azo atao ihany koa ny mahazo fitifirana hatramin'ny 8,6 fps, izay tsy ratsy velively.
Farany, enta-mavesatra ny bateriny dia hamela anao haka hatramin'ny 330 tifitra ary ny sary rehetra dia azo zaraina amin'ny alàlan'ny fifandraisana WiFi. Ny Olympus OM-D E-M10 Mark III dia hamidy amin'ny tapaky ny volana septambra izao. Hita amin'ny alokaloka roa izy io: mainty na volafotsy. Ary koa, azonao atao ihany izany ny vatana mitentina 649 euro. Na, misafidiana fonosana solomaso miisa roa: vatana miampy M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1: 3.5-5.6 II R solomaso vidiny 699 euros; raha ny fonosana faharoa dia: vatana miampy M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1: 3.5-5.6 EZ family pancake a 799 euros.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Sary sy feo » sary » Olympus OM-D E-M10 Mark III, fikasihana Retro ary mety ho an'ny dia
Lenovo Retro ThinkPad hampatsiahy ny fotoana lasa